Sdị na Ahịa Ahịa: Kpachara Anya Na Nlekọta | Martech Zone
Michael Brito, nkà Onye isi oche ndị isi nke Social Business Planning na Edelman Digital (na gburugburu ezigbo akwa), na nso nso a dere banyere ụdị abụọ nke ahụ na-agbanwe mgbanwe dị ukwuu nke ahịa ha n'ime ebe mgbasa ozi.
Achọpụtara m na ọ na-agba ume na ndị na-akwado ụlọ ọrụ oge mbụ na-agbanwe usoro azụmaahịa ọdịnaya ha n'ime usoro ikpo okwu zuru oke. N'akụkụ nke mgbanwe a, agbanyeghị, enwere usoro azụmaahịa ndị ọzọ anyị kwesịrị iji anya dị oke egwu soro, ma ghara ịmegharị ụlọ ọrụ mgbasa ozi akuko.
E nwere nnukwu omume na-eme na ụlọ ahịa ahịa, ọ nwere ihe abụọ. Nke mbụ bụ nkata na-aga n’ihu banyere ihe niile ahịa ahịa, nke n’aka nke ya, bụ ụfọdụ, tinyere echiche nke ịkọ akụkọ dị irè.
Akụkụ nke abụọ bụ echiche nke ika oru ndi, na ụdị ndị ahụ nwere ike ịghọ ndị na-eweta mgbasa ozi, ọ bụghị naanị ọdịnaya na akụkọ ndị lekwasịrị anya na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ika ahụ, kama na-eme dị ka ụzọ mgbasa ozi. Ndị ụlọ ọrụ dị n'okpuru nkwupụta nke mgbanwe dị egwu nke mgbasa ozi ọdịnala, na nnwere onwe ezigbo akwụkwọ akụkọ, na mpaghara dijitalụ. Na mberede, onye ọ bụla bụ nwa amaala nta akụkọ (nke bụ naanị ihe nzuzu).
Coca Cola nso nso a mere ihe akụkọ site na ntinye ha ka ha wepu ulo oru ulo oru ha n'ime akwukwo ahia, nke ihe kariri ndi edemede 40, ndi na-ese foto na ndi ozo. Ugbu a, ọ na-adọrọ mmasị n'akụkụ ụfọdụ n'ihi na ha were nke ahụ ịbụ "isi mmalite a pụrụ ịdabere na ya", ha ga-etinye ụfọdụ oge ikuku na echiche echiche nke nwere ike ọ gaghị abụ kpọmkwem na ọdịnaya dị mma maka akara ahụ.
Nke a bụ ebe m na-edeba ama, na ewepu. Ọtụtụ ndị taa na-aghọta na ịsọ mpi nke ọma, ha ga-akwụrịrị ụgwọ okwu maka okwu sitere na nkwado gburugburu ebe obibi, na ikike mmadụ. Akụkụ nke nkwa a maka ọrụ mmekọrịta mmadụ na-egosi na ụlọ ọrụ kwesịrị ileba anya na azụmahịa ha, wee rụọ ọrụ iji meziwanye ebe ọ dị mkpa maka azụmaahịa ha. N'iburu nsogbu ndị gara aga Coca Cola nwere na India na Africa ebe nlekọta mmiri bụ isi okwu, anaghị m atụ anya mbọ dị ukwuu iji gosipụta na saịtị Njem. Ma adabaghị m.
Coca Cola etinyela ezigbo mgbalị iji kwurịta okwu a, yana nkwakọ ngwaahịa na-adigide, mmetụta ọrụ ugbo, wdg. M ga-agba gị ume ka ị gụọ ha Nkwupụta Nkwado 2012.
Ugbu a, nke a bụ mmalite dị ukwuu, m na-aja Coca Cola mma maka itinye ozi dị otú ahụ. Ma ọ bụghị ika oru ndi. Anyị ekwesịghị ichegharị akụkọ banyere ihe eji akuko banyere ndi nne na nna na umuaka ha, akuko anyi guru ma tulee ya n’ebe anyi na efe ofufe, akuko banyere ezi na ulo anyi.
Nnukwu ihe na-esote Coca Cola ga-abụ ịmepụta ikpo okwu ebe ụdị okwu ndị a dị n'ihu na etiti, ebe obodo nke ndị na-azụ ahịa, ndị na-eme ihe ike, na ndị agbata obi nwere ike ịmekọrịta. M ga-ekwenyekwa na onye na-azụ ahịa na-azụ ahịa ga-abụ ihe na-adịgide adịgide na obodo a, na enyere ha ikike ka ha bụrụ ihe na-egbu mgbu oge ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dị otu oge chee nke ahụ akuko nwere ike ịdị n'ime oke nke marketing, ha na - edo onwe ha onodu n’etiti uzo ozo na - esote.
Tags: ika oru ndicontent Marketingatụmatụ ọdịnayamamaịkọ akụkọ
Nov 21, 2012 na 11:47 AM
Chei Marty - ị kpọgidere ya. Echere m na e nwere ebe hubris nwere ụdị ndị kwenyere na ha bụ etiti elebara anya. Ndị na-agụ ya maara mgbe niile na ha na-agụ akwụkwọ ahịa! ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ga-eji nwee usoro etiti nke ha yana usoro ịgbasa ozi!
Nov 21, 2012 na 2:02 PM
Akwa post Marty, mana ana m echegbu onwe gbasara mkparịta ụka gbasara ụlọ ọrụ dị ka Coke bụ ndị mere ihe n'eziokwu n'ihe niile na-ezighi ezi mgbe ọ bịara… nke ọma ihe niile maka oge gara aga for nke ọma ruo mgbe ebighị ebi.
Nov 21, 2012 na 2:34 PM
M na-akatọ ha n'oge gara aga, mana enwere ike na anyị ga-ahụ ntụpọ n'ime, ma ọ bụrụ na ejiri akọ akụkọ akụkọ ụlọ ọrụ. Echere m na ajụjụ a bụ ma ụdị mgbalị a nwere ike ibute ngbanwe nwayọ nwayọ n'ime ụlọ, ma ọ bụ ọ ga - abụ naanị akwụkwọ ntanetị n'ịntanetị. Ma mgbe ha nọ ya, weghachite karama ochie 6.5 ounce, were ezigbo shuga.
Nov 22, 2012 na 9:22 PM
Marty - achọtara m ọkwa HBR a na-ekwu maka mgbanwe nke Coca-Cola - na-adọrọ mmasị na ya. http://blogs.hbr.org/cs/2011/04/coca-colas_marketing_shift_fro.html
Nov 30, 2012 na 1:11 AM
Ọ dị mkpa na ọtụtụ obere azụmaahịa nwere ibe
nti PR. Na-enweghị mgbasa ozi mmekọrịta, enwere ike ịhapụ azụmaahịa ha
Nov 30, 2012 na 5:04 PM
Anaghị m ekwenye n'ụzọ zuru ezu, ebe m kwenyere na ụdị dị iche iche nwere ike iwepụta ụfọdụ ebumnuche na ọdịnaya ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ gbanyere mkpọrọgwụ na ịba uru, karịa nkwalite. Ọ bụ naanị na ọdịbendị ọ bụghị na DNA kachasị ka ịme ya. Akwa post Marty. Enwere m echiche.
Dee 3, 2012 na 10: 34 AM
Daalụ Jay. M na-ezo aka mgbe niile na mantra gị nke inye aka, ọ nwere ike mgbe ụfọdụ na-esiri ike maka ịzụ ahịa ka ọ gbanwee n'echiche a. Anyị ahụla site n'aka Edleman Trust Barometer na ndị na-azụ ahịa na-atụkwasịkwu ndị ọgbọ ha obi, mmekọrịta ha na mmekọrịta ha, na obere ihe ụlọ ọrụ na-eme. Ekwenyere m na òtù dị iche iche nwere ike ịmalite ịgbanwe echiche ndị a, mana ọ bụ usoro nwayọ. Ndi mmadu dika Tom Foremski bu ndi isi nke uwa ohuru a nke ndi oru nta akuko, dika ndi mgbasa ozi. 2013 ga - abụ nnukwu afọ maka mbọ iji hụ ka ụlọ ọrụ dị iche iche na - esighi ike tụkwasị obi.